China China factory N'ogbe Super 2.0 Channel Home aterlọ ihe nkiri BT5.0 3D Hifi Bass Sound TV Soundbar (SP-614) Imeputa na Factory | Eyin
Factorylọ ihe nkiri Chinese Super 2.0 Channel ụlọ ihe nkiri BT5.0 3D Hifi Bass Sound TV Soundbar (SP-614)
Inye ike: DC, 18V / 2A
Nkeji ụgbọala: 2.25 ″ x4
Nha ngwaahịa: W860 × D70 × H70MM
AKWOUKWỌ AKW WITHKWỌ NA SUBWOOFER:
Suppnye ọkụ: AC110V ~ 240V 50 / 60Hz, DC18V, 4A
Nkeji ụgbọala: 2.25 ″ x4 + 5.5 ″ Ike Ike: 80W
Ntughari oge: 30Hz-20KHz
Size Soundbar: W860x70x70MM
Nha Subowoofer: W265x210x230MM
• ezigbo & MGBE HLỌ ATlọ ihe nkiri Ahụmahụ - Na kwalite 34 sentimita asatọ n'ogologo, n'okpuru 2.5 sentimita asatọ elu, matte ojii okokụre imewe, na TV ụda mmanya anapụta gị mara ụlọ sinima ahụmahụ. Abụọ 6-anụ ọhịa n'etiti-nso ọkwọ ụgbọala, 1-anụ ọhịa tweeters, na nanị Power Bass technology na-eme ka ufiop ala frequencies na 110dB nke doro anya ụda. Ọ na-engineered ka sọrọ n'akụkụ symmetrical bass mpiaji ọdụ ụgbọ mmiri, na miri ala na ndị ọzọ ike. Nụrụ ụda ahụ, nwee mmetụta dị iche!
• BLUETOOTH 5.0 & DSP NT MKWU NDOST KWES --R - KWES --R - - Ogwe ụda ọhụrụ anyị na-anabata teknụzụ Bluetooth 5.0 & DSP iji hụ na nnyefe ọsọ ọsọ kachasị ọsọ, na njikọta siri ike ruo 50 ft na obere oriri. Site na njirimara Bluetooth 5.0 kachasị ọhụrụ, ịnwere ike ịkpọ egwu kachasị amasị gị ebe ọ bụla. Iji mee ka ọ dịkwuo mfe, anyị gbakwunyere bọtịnụ Bluetooth na ụda mmanya nke na-enye gị ohere ijikọ ngwaọrụ gị ngwa ngwa.
• KWESTERR EN NTTERKWU ND WITH DOU N'IFLỌ NTFKWU - Music, Ihe nkiri, modekpụrụ nkịtị na-agbanwe site na iji eriri dị. Na Ọnọdụ Movie, gbanwee ihe nkiri nkịtị na ahụmịhe ụlọ ihe nkiri pụrụ iche. Tinye idoanya ọzọ na egwu dị egwu na egwu ọkpụkpọ gị n'ụdị egwu. Na Usoro nkịtị, ndị injinịa Eyin iji mesie ụda olu mmadụ ike ka ị nwee ike ịgbaso akụkọ ahụ mgbe niile. Agbakwunye ụda na ike ọzọ dabara adaba n'akụkụ ụda ụda.
• NTKWU ND IN NTKWU ND E D - MFE - Ihe ntanetị TV TV anyị na-akwado ọtụtụ nhọrọ ntanetị gụnyere HDMI ARC, Ntinye, ntinye AUX, na USB kwekọrọ na TV, projector, kọmputa, Blu-ray player, tablet, XBOX, PS4, Amplifier, na Ọzọ. Nanị jide n'aka na TV gị ọdịyo ntọala ka PCM maka ngwa anya mode tupu ojiji. Ugbu a, eriri adịchaghị 5 ft Optical na 5 ft RCA cable so na ngwugwu.
• AKW MOKWỌ AKW &KWỌ AKW &KWỌ & YOURlọ Ọrụ Gị NA-AH GU KWES GUR - KWES --R - - Thedị ihe eji emepụta ihe dị egwu nke ụda ụda dabara nke ọma n'okpuru TV ọ bụla ma ọ bụ nwee ike ịdakwasị ya na mgbidi nke nwere ihe nkwado na-etinye. KWES WARR WAR Nkwado ndụ. Ọ bụla Eyin ụda mmanya ga-aga site a nlezianya àgwà ule usoro tupu eziga.
Nke gara aga: 2021 Ogwe Soundda Ọhụrụ na Subwoofers, Bluetooth, na Alexa Voice Control Wuru Na (SP-620E (S100))
Calọ ihe nkiri calọ ihe nkiri Rca
Barlọ ihe nkiri barlọ barlọ Soundbar
2020 Hot n'ire TV soundbar na Ikuku Subw ...
2.1 Thelọ ihe nkiri nke 3D 3D stereo Soundbar ...
Top mma MAXX BASS ihuenyo mmetụ soundbar bú ...
China suppliers osisi soundbar ọkà okwu home nke ...
N'ogbe Cheap High Quality Home aterlọ ihe nkiri Stere ...
Ugwu Tv na Soundbar, WiFi Soundbar N'ihi Tv, Karaoke Soundbar, Ndị na-ekwu okwu Wifi Soundbar, Alexa Soundbar, Tv Soundbars,